What You Didn't Know About Surveillance Cameras
Dr Lim Teck Ghee Responds To Dr Chandra Muzaffar On Bersih 3.0
Xenophon should reject New Straits Times apology by Bob Teoh
Wesak 2012 @ Lunas
Don't piss in my ear and tell me it's raining by Commander (Rtd) S THAYAPARAN, formerly of the Royal Malaysian Navy
Pendedahan Terkini Ratu Botox & Menteri Top-Up (Zahida - Shafie Apfal)
Muktamar PAS Kawasan Jasin Lulus Usul Desak BERSIH 4.0 Diadakan Sebelum PRU13
NGO Tolak Panel Bebas Siasat Bersih 3.0
ရခိုင် တိုင်းရင်းသားတို့ခံစားချက် ဘလော့
4 Peguam Wanita Saman KPN, Kerajaan
Sanggup Pukul Wartawan & Rakyat Malaysia, KPN Dianugerahkan Pingat Oleh Singapura?
Natasha Wan Xue Wen
Rusuhan Cubaan Gulingkan Kerajaan: Semuga "Doa" Najib Diperkenan Tuhan
Yes, I would die for you, baby… (Grenade, Bruno Mars)
To all the young people out there who are reading this, especially young teenage girls that I read on papers seem to prefer living in smelly flat houses with their drug addict boyfriends rather than home with their families;
Your lovers will not catchagrenade for you! Bruno mars will not jump in frontatrain for you! That sweet talking Indonesian guy from Lombok will not die for you!
YOUR MOTHER WILL!! At least I know I would for Miki…
If fact many mothers are dying… not by exploding bombs and penetrating bullets but due to complications during pregnancy and childbirth. Living in prosperous Malaysia may make us oblivious to this but every year, in all over the world, 350,000 moms die because of that. That's one woman every 90 seconds. Tell me can it be more distressing than this? When we all know that these deaths can be prevented?
My heart was really broken when I read about these poor women from HERE
As my blog readers probably have known, I am now7months pregnant and so far thank God I am in the pink of health and praying that this blessing will continue until I safely deliver this second baby of mine. I am seeingavery good OB/GYN and surrounded by probably ten hospitals and medical centers within ten kilometer radius of my home. But there are women out there in the other parts of the world probably have never metadoctor. Yes, it is sad. Watch this…
We all know Mother's Day is coming really soon. Usually Azman will take me to nice dinner with our son Miki to celebrate. This year, I am going to request for something different. I will cookanice dinner for us but the money he usually spend for that fancy grilled steak or extra-fresh sashimi will still be spent – TO THE OTHER MOTHERS THAT NEED IT MORE THAN ME!
As Mummy-to-Miki is overly fed and overly nourished, I want Azman to buyanutrition kit from here to other Moms who are hungry.Insya Allah, He will bless the hands that give.
I knowalot of fellow Moms and Dads read my blog. So come on everyone, this year let's makeadifference and donate to that deserving person who would jump in front of train for her child – A MOTHER!
Honour thy mother. Happy Mother's Day in advance.
Posted: 05 May 2012 11:00 AM PDT
The article written by Lara Flanders and Noam Chomsky began with this quote:
We'reanation whose leaders are pursuing policies that amount to economic "suicide" Chomsky says. But there are glimmers of possibility.
Noam Chomsky has not just been watching the Occupy movement. A veteran of the civil rights, anti-war, and anti-intervention movements of the 1960s through the 1980s, he's given lectures at Occupy Boston and talked with occupiers across the US. His new book, Occupy, published in the Occupied Media Pamphlet Series by Zuccotti Park Press brings together several of those lectures,aspeech on "occupying foreign policy" andabrief tribute to his friend and co-agitator Howard Zinn.
(From the Centre of Policy Initiatives)
A response to Chandra Muzaffar's lambasting of Bersih
Friday, 04 May 2012 10:23
have asked me what prompted the extraordinary hatchet job that Dr
Chandra Muzaffar attempted on the Bersih 3.0
Posted: 05 May 2012 08:58 AM PDT
COMMENT There are rare instances when an apology should not be accepted. The New Shit oops Straits Times' (NST) public apology to Australian independent senator Nicholas Xenophon is one such occasion.
Adding insult to his injury,asimilar article appeared in the Malay language daily, Utusan Malaysia, quoting the same doctored speech from Xenophon (right), describing him as an anti-Islam politician as well asastaunch supporter of same-sex marriage. Utusan has yet to apologise. Both papers are owned by Umno, the main party in the ruling coalition.
NST did not apologise at the earliest opportunity. It only did so after it was hauled up by Australia's High Commissioner to Malaysia yesterday. In the context of the Asian culture of shame, it becomes extremely difficult to accept an apology when one becomes an object of 'biadap' (barbaric, uncivilised) and 'hina' (scurrilous) attacks unless it is accompanied by genuine remorse. There was none forthcoming from NST.
NST fails to meet the ingredients ofagenuine apology. It is insincere and failed to understand the gravity of its transgressions nor showed appropriate remorse. Instead, NST is seeking to deceive its readers that it wasa"gross error." In truth, it was never an error. NST went out of it s way to vilify the visiting senator by barbaric means.
1. Inaspeech made in the Australian Parliament on 17.11.2009, Mr Xenophon was critical of Islam and came out openly in support of the lesbian, gay, bisexual and transgender issue.
2. Mr Xenophon is reported to have said in his speech that "What we are seeing isaworldwide pattern of abuse and criminality. On the body of evidence, this is not happening by accident; it is happening by design. Islam is notareligious organisation. It isacriminal organisation that hides behind its so-called religious beliefs."
We hereby confirm that we have madeagrave error in publishing the statements in the article. We accept that in his speech in the Australian Parliament referred to in the article, Mr Xenophon did not use the word "Islam" and neither did he assert that Islam is notareligious organisation butacriminal organisation hiding behind its religious belief.
Speech criticising Scientology
What NST did not admit was that Xenophon had madeaspeech criticising Scientology, but references to that belief was diabolically replaced by NST with the word "Islam". This puts the senator's life at risk from extremist elements as he was visiting Malaysia.
Both NST and Utusan are guilty of incendiary hate speech by using the race and religion card. They should not be allowed to get away with an empty apology for their irresponsible and highly dangerous act. Xenophon should reject the apology and sue. It is Umno which should apologise to both the senator and the papers' readers for the deception and gross indecency. Malaysiakini
Posted: 04 May 2012 10:13 PM PDT
Posted: 05 May 2012 08:47 AM PDT
COMMENT Abdar Rahman Koya's 'In defence of storming the barricades at Dataran' is nothing more thanabellicose, pro-Anwar Ibrahim polemic that should be rejected by all right-thinking Malaysians interested in non-violent protests, which at this moment isapossible avenue for constructive change in Malaysia. Abdar Rahman laments the fact that the cause of electoral reform has been sidelined by the violence on April 28, but yet chooses to glorify those who partook in it and mock those who were there forapeaceful non-violent protest and their anger at those (whoever they are and for whatever reason) who may have provoked that violence by storming the barricade.
He assumes these 'law-abiding citizens' have not asked those important questions that he thinks relevant such as 'which law' and 'whose courts' forgetting the fact that there were many protesters who were repeat offenders of previous Bersih marches who obviously disregarded 'unjust laws' imposed by an 'unjust regime' to attend those marches. What Abdar Rahman does not seem to consider is whoever broke through those barricades did not consider the more important compact between the general public and the Bersih steering committee forapeaceful non-violent protest.
They (and him) did not consider the various other interest groups who were there like the Himpunan Hijau movement and various other NGOs which signed up foranon-violent protest and who agreed with the parameters the Bersih steering committee agreed to. In other words, what was more important than the state laws were those 'laws' that these various interests groups and the general public made between themselves - 'laws' which those (for whatever reasons) who broke through the barriers had no respect for. This to me is the more egregious offence.
Our answer to the Rio carnival
The writer's sycophantic colours are on proud display when he mocks those who he thinks have "an inborn allergy" to opposition parties like PAS and PKR forgetting (again) that Malaysians are voting across racial and religious lines and some of them (indeed)agood portion were probably marching but who did so under non-partisan banners, much like how PSM's S Arutchelvam and PKR's R Sivarasa reminded those before them that this wasaBersih non-partisan march.
They did this because they want electoral reforms asasafeguard against any political party subverting the will of the rakyat. And no, being peaceful does not mean abiding to unfair laws. It means abiding to the will of the majority who were there to protest inapeaceful manner those unjust laws that subjugate us. Bersih was indeed our answer to the Rio carnival. It was our carnival of people of different races and creeds marching together underacommon banner for the betterment of all, instead of slavish devotees to political parties which make compromises on our behalf which usually benefits only them.
It wasamultiracial, multireligious street party which is what this type of regime fears the most. They fear people of all races and religions coming underacommon cause, even worseanon-partisan cause of their own free will. Folks who were outshouting those who screamed 'reformasi', and I know forafact there were many PKR supporters who did this, did so to remind their fellow protesters that this was bigger than the mere political parties that claim to represent us.
We were not forgetting anything but disregarding our political allegiances foramoment by advocating something which were bigger than our petty political party concerns.
Abdar Rahman's dig at blogger Marina Mahathir's admiration for Bersih co-coordinator S Ambiga's ability to pull in the crowd by reminding her of the numbers Anwar managed to bring during his post-Umno exile is cute but rather misleading. I was one of the so-called 100.000 who were there in 1998 and I was there (inasymbolic gesture to my PAS comrades) withamostly Malay crowd who were there looking for their next messiah.
Since then Anwar's fortunes have shifted because of individuals like Ambiga andachanging political and social landscape cognisant that multiracialism is the best antidote to Umno's racist venom. Of course, there wasastrong anti-BN vibe on April 28 but for the most part most people had no problem compartmentalising their political affiliations and the aims of this non-partisan protest.
And the truth is we did not go there to intentionally break the law. And the most important thing to remember is that breaking the law does not mean engaging in violence. We can break the law, and indeed most of have, but we do this by non-violent means. And what disgust me about Abdar Rahman's piece are these words: "The barricades blocking our march into Dataran Merdeka are the clearest and most tangible symbol of the government's animosity to the ordinary public."
No. Every day we are greeted by the government's tangible animosity towards ordinary citizens by the racist propaganda Umno members their outsourced thugs and their propaganda organs spew and the unjust manner in which laws are imposed on different ethnic groups. I despise Utusan Malaysia for instance and if there wasapeaceful protest against this 'newspaper' I would never advocate storming this Umno mouthpiece or harming its personnel even though they provoke 'us' every single day.
For the moment, leave the storming of barricades to Umno, like when Umno Youth (supported rather quietly by BN Youth) stormed the Asia Hotel when the East Timor meeting was going on. Or how about former Anwar stalwart Zulkifli Noordin (with the help of the police) storming the Bar Council interfaith meeting.
We storm the barricades, then what? What does this show except that peaceful demonstrations will always be hijacked by those who think they know better than the majority who were there.
What does this achieve but play into the lies of the Umno regime? What of the citizens who were there, satisfied to protest and later vent their anger in the voting booth? What of the children who could have been hurt because some people have no idea that there are various kinds of tyranny that should be dealt with in different ways depending on the situation? And let's not forget that sooner or later, confrontations like these will turn into racial ones with Umno coming down on minority groups for the sole purpose of destabilising the opposition.
If you want to play Tahrir Square heroes, have the decency to inform people that this was the objective of the protest. Have the courage of your convictions and allow others to demonstrate the same commitment by giving them the choice to attend these violent confrontational protests. Don't hijackacause and then claim the moral high ground by equating what is happening in Malaysia with the sectarian conflict in Egypt or the CIA/MI6-muddled Iranian revolution.
Gandhi's salt marchers stood by peacefully as they were thrashed by the British-sponsored local battalions. Rosa Parks did not hold upabus to get in but rather planted her ass on the seat and refused to move. And when Umno decides to erectareal wall as opposed to the metaphoric ones separating citizens, I'll be there helping to tear it down as I do the metaphoric ones by attending these non-violent meet-ups. Don't piss in my ear and tell me it's raining.
I suspect the Umno regime using agent provocateurs were behind the violence but if Anwar or anyone associated with PKR gave the orders to storm the barricade, it just shows how desperate they are for political mileage at the expense ofaworthy cause that most people attended bona fide. I reject them as I do the excessive police violence inflicted on them... on you who would have been proud to participate in the storming. But don't you dare try to emotionally blackmail those who disagree with those people who stormed the barricade by alluding to historical events that you misapply to the Malaysian context.
Don't you dare mock those people who attended in goodwill, most probably taking their first tentative steps into publically objecting to this regime inanon-violent manner.
Don't you dare mock the feel-good carnival atmosphere ofamultiracial moment in Malaysian history of undeserving of recognition because it falls short of your 'revolución' pose. Malaysiakini
Posted: 05 May 2012 10:15 AM PDT
Syarikat Zahida, Noble Benchmark juga turut diberi peluang menghasilkan dua buah filem pendek berjudul
'Budi Bahasa' dan '1Malaysia' terbitan FINAS dan beberapa kontrak persembahan pentas ketika Menteri Top-Up menjadi Menteri Perpaduan, Kebudayaan dan Warisan Malaysia di antara 18 Mac 2008 sehingga9April 2009.
"Saya bukan nak cakap besar, tapi London sudah macam rumah kedua saya. Sekurang-kurangnya setahun dua kali saya ke sana terutama pada waktu jualan murah musim Krismas. Saya juga sangat selesa dan mahir dengan jalan-jalan di sana. Lebih daripada itu, saya mempunyai ramai teman di London, jadi tak terasa asing," ujar Zahida kepada wartawan yang mempersoalkan hidup mewahnya sedangkan beliau bukan artis popular yang berpendapatan besar.
Oleh: PAPARAZZI SABAHKINI.NET
Posted: 05 May 2012 07:29 AM PDT
Posted: 05 May 2012 05:22 AM PDT
Orang ramai memberi pelbagai pendapat mengenai penubuhan panel bebas bagi menyiasat keganasan Bersih 3.0, Sabtu lalu.
Mereka berkata, panel tersebut hanya kosmetik dan tidak boleh menyelesaikan keganasan tersebut.
NGO Jingga 13 menolak panel bebas itu dengan alasan ia tidak mempunyai kuasa untuk mendakwa pihak yang melakukan kesalahan dalam perhimpunan Bersih 3.0.
"Suruhanjaya diraja lebih baik kerana mempunyai kuasa mendakwa mereka yang terlibat dengan keganasanan dalam Bersih 3.0.
"Kita rasa panel bebas ini tidak lebih dari kosmetik sahaja sedangkan pelaku masih bebas," kata Koordinatornya, Faris Musa.
Penganalisis politik tempatan, Prof Datuk Zainal Kling berpandangan semua pihak perlu dibenarkan menyertai panel bebas tersebut untuk memastikan keberkesanannya.
"Semua orang kena masuk…pihak keselamatan, hakim, pembangkang dan sesiapa sahaja yang mempunyai bukti.
"Biar siasatan itu lengkap, sebelum pihak peguam negara membuat tindakan lanjut," kata beliau.'
Bagaimanapun, Zainal berkata, penubuhan panel bebas itu menunjukkan kerajaan seolah-olah tidak mempercayai mempercayai tugas agensi keselamatan mereka.
NGO Jingga 13 pula menolak panel bebas itu dengan alasan ia tidak mempunyai kuasa untuk mendakwa pihak yang melakukan kesalahan dalam perhimpunan Bersih 3.0.
Kordinatornya, Faris Musa berkata, cara terbaik ialah dengan menubuhkan suruhanjaya diraja kerana mempunyai kuasa yang lebih berbanding panel bebas.
"Kita rasa panel bebas ini tidak lebih dari kosmetik sahaja sedangkan pelaku masih bebas," tambahnya.
Menurutnya, kes Bersih 3.0 ini perlu ditangani secara bijaksana supaya pelaku keganasan tidak terlepas dari undang-undang.
Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Hishammuddin Hussein mengumumkan penubuhan panel bebas itu bagi menyiasat keganasan Bersih3di ibu negara Sabtu lalu.
Beliau memberi jaminan panel itu membuat siasatan secara bebas dan adil.
Dalam perhimpunan Bersih 3.0 itu berlaku kekecohan apabila orang ramai menyerbu Dataran Merdeka yang menyebabkan polis menyembur gas pemedih mata dan menangkap mereka yang terbabit.
Kedua-dua pihak saling tuduh menuduh yang mendakwa masing-masing menjadi punca keganasan tersebut. -FMT
Posted: 05 May 2012 03:17 AM PDT
ယနေ့လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူမျိုးရေး ဘာသာရေး လှုံ့ဆော်မှုများ ပြင်းထန်လွန်းခြင်းကို သံသယဖြစ်မိပါသည်၊၊
ဤ ပြဿနာသည် ကြီးမားပါသည်၊၊ သို့သော် တိုင်းပြည်ပျက်လုမတတ် အရေးပေါ် မဟုတ်ပါ။။
ပြည်တွင်းရှိအင်ဒိယ အနွယ်များနှင့် ၎င်း၊ အစ်စလမ် ဘာသာဝင် တို့နှင့်၎င်း ပတ်သက်မှု မရှိပါ၊၊
သို့သော် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ကြီးပြော ရလျှင် ရခိုင်အမျိုးသား တို့ နှင့် ရခိုင်သွေးပါဝင်သူ တို့က အလွန်အကဲစပ်နေသည်၊၊
မြန်မာ နိုင်ငံ အတွင်း ကြီးမားသော အရေးခင်းတစ်ရပ်ပေါ်ရန်ကြိုးပမ်းနေသည်။
ရခိုင်မှ ရဟန်းများ၊ပညာတတ်များ ကပါဝင် လုပ်ဆောင်ခြင်းမှာ ဝမ်းနည်းစရာပင်၊၊
ရလုဆဲဆဲ အေးချမ်းတည်ငြိမ် မှု နှင့် စီးပွားရေးကြပ်တည်း မှု များပြေလည် ရန်နီးကပ်ချိန်တွင် တိုင်းပြည်ကို ကြမ္မာဆိုး ထဲ တွန်းပို့ ရန် ကြံရွယ်သူတို့ ကို သိနိုင်ရန်ဖေါ်ထုတ်ပါသည်၊၊
ရိုဟင်ဂျာ ပြဿနာ သည် ဦးနေဝင်း လက်ထက် ဟင်္သာစီမံချက်ဖြင့် ဖြေရှင်းခဲ့သောပြဿနာ ဟောင်းဖြစ်ပါသည်၊၊ ထိုစဉ် က မြန်မာမှ ပြန်ထွက်ပြေးသော ဘန်ဂါလီ များကို ဘင်းဂလားဒက်ရှ် မှလဲ လက်မခံဘဲ စခန်းဖွင့် ၍ သာလက်ခံခဲ့ပါသည်၊
လက်ရှိ ဗင်းဂလားများ မှ မြန်မာပြည် ဝင်လာခြင်း မဟုတ်ပါ၊၊သူတို့သည် ဗင်ဂါလီပတ်စပို့ဖြင့် တကမ္ဘာလုံး သို့လွတ်လပ်စွာသွားနိုင်သော အခွင့်ရေးရှိပါသည်။။
ဗင်းဂလားဒက်ရှ် ၏ သနားဂရုဏာ ကင်းသော ဆောင်ရွက်ချက်ကြောင့် ဗင်ဂါလီ သွေးဖြစ်ပါသော နိုင်ငံမဲ့ ဒုက္ခသည်များ သာလျင် မြန်မာပြည်သို့၎င်း၊ မြန်မာပြည်မှ တဆင့် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ သို့၎င်း အသက်ကိုပင် စွန့်၍ ကြိုးစားကူးဝင်ကြပါသည်၊၊သူတို့ အနက် မြန်မာစကားပြော နိုင်သူများလည်းရှိပါသည်၊၊
၎င်း တို့နေရာ ဗင်းဂလားဒက်ရှ် ဒုက္ခသည် စခန်းတွင် အလွန်ဒုက္ခရောက်ရသူများ လည်း ရှိပါသည်။၊ အနိုင်ကျင့်သော လူဆိုးဂိုဏ်းများ လည်းရှိပါသည်။၊ သေ မထူး ခံယူချက်ဖြင့် သမုဒ္ဒရာ ကို လှေဖြင့်ဖြတ် ရသော ခံစားချက်ကိုတွေးဆ ပြီး အခြေနေကို သုံးသပ်နိုင်ပါသည်၊၊
http://www.fatherarankan-ra.blogspot.com/ မှ ကူးယူဖေါ်ပြပါသည်၊၊ ရခိုင်ဘာသာဖြင့်ရေးသား မှုဖြစ်ပါသည်၊၊
(ရခိုင် အမျိုးသားတို့၏ ခံစားချက်)
ရခိုင်ပြည် ကျွန်သက် အနှစ် (၂၂၆) နှစ် ကြာသောအခါမြန်မာကျူးကျော်စစ်ကို (၄၅) ရက်ကြာကြာ ခုခံတိုက်ခိုက်ပြီးနောက် (၁၇၈၄) ခု ဒီဇင်ဘာလ (၃၁) ရက်နိတွင် ရခိုင်ပြည်ကြီးနှင့်တကွ ရုပ်ရှင်တော်မဟာမြတ်မုနီ အသိမ်းခံလိုက်ရသည်။
မြန်မာများသည် ရခိုင့်ရွှေနန်းတော်၊ ပိဋကတ်တိုက်တော်၊ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း အကြီး (၃၀)၊ အငယ် (၃၀၀၀) ကျော်ကို မီးလျှို့ဖျက်ဆီးခသည်။
ရခိုင်တပြည်လုံး ဖူးဖူးရောင်သော လူသီကောင်များဖြင့် ပြန့်ကြဲလျှက်ဟိုသည်။ နှစ်ပေါင်း (၅၀၀၀) ကျော် ကိုယ့်ထီးကိုယ့်နန်းဖြင့် နီထိုင်လာခသော ရခိုင်နိုင်ငံတော်၌ တိုင်းသားပြည်သူများမှာ ကူမည့်သူမဟိ လွတ်ရာကို ထွက်ပြီးကြရသည်။
မြန်မာများသည် ပုခက်တွင်းသား အချေသူငယ်များကိုမချန်သတ်ဖြတ်သည်။ရခိုင်မှတ်တမ်း၌ "အချေသူငယ်၊ အစိတ်ကေရို့၊ ပြုံးရယ်ရွှင်ဘိ၊ မိမသိကို၊ မွီးမိထံမှ၊ ယူပြီးမှလျှင်၊ လက်ကိုကိုင်မြှောက်၊ ကောင်းခင်ရောက်က၊ အောက်မှတဖန်၊ ဓါးကိုလှန်၍၊ ခံပြန်ပြုခါ၊ မြှောက်လီမှာလျှင်၊ ကျလာမလွဲ၊ နှစ်စိပ်ကွဲ၍၊ ရဲရဲသွီးစက်၊ အအူထွက်၏။
တချက်မြီ၌၊ လှံကိုစိုက်၍၊ လံလိုက်တုံလျှင်၊ ရင်ကဝင်၏" ဟူ၍ တွိရပါသည်။အသတ်ခံခရသော ရခိုင်သားများကို "တင်းဝပန်းခိုင်၊ တမြိုင်မြိုင်၊ ရခိုင်လူအလောင်း" ဟူ၍ မှတ်တမ်းတင်ထားခသည်။ ဂဏန်းသင်္ချာအလို (၇) သန်းကျော်သည်။
မြန်မာများသတ်ဖြတ်ခသည်ကို အစွဲပြု၍ ဂေါင်းပုံပြင် (မြောက်ဦး)၊ လူသတ်ဂျိုင် (မြောက်ဦး)၊ ရီတက်ရီကျသောအခါ သောင်ပြင်တွင်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ချိုင်နှောင်၍ သတ်ခသောကြောင့် ရီအကျတွင် ဖြူနီသောအလောင်းကောင်များကို မြင်ရသောကြောင့် ပေါက်ဖဲ့ရွာ (မန်အောင်၊) လက်များကိုဖြစ်၍ တောင်နှယ်ပုံထားသောကြောင့် လက်ပုံတောင် (မာန်အောင်)၊ ရီကန်တွင် လူအပြည့်သတ်၍ ပုံထားသောကြောင့် သီဘေးကန် (ပေါက်တော)၊ အချေငယ်များကို ရီကျရီတက်ချိန်တွင် ခြံလှောင်၍သတ်ခသောကြောင့် ခြံလှောင်ချောင်း (မာန်အောင်)၊ ခြံပြင် (မောင်တော)၊ သွီးချောင် (တောင်ကုတ်)၊ လူ့အသားတစ်များကို ခွတ်ဖြတ်၍ပုံထားသောကြောင့် အသားပုံရွာ (ပုဏ္ဏားကျွန်း) စသည့်စသည့်ဖြင့် နာမတွင်သည်။
နှစ်ပေါင်း (၄၀) လုံးလုံး ရခိုင်အမျိုးတုံးလားအောင် သတ်ဖြတ်ခသည်။ မာန်အောင်မြို့ တမြို့တည်းတွင် အသတ်ခံခရသည်ကို မှတ်တမ်းတင်ထားသည်မှာ "လူငယ်တသောင်း၊ လူကြီးပေါင်းမူ၊ သျှစ်သောင်းအစွန်း၊ တသိန်းမှန်း၏၊ မယွန်းထိုခါ၊ သီကုန်ပါ၏၊ သိမ်းကာယူက၊ ပြည်အင်းဝသို့၊ ပါရလီငြား၊ လူယောက်ျားနှင့်၊ မပြားမှန်ထ၊ လူမိန်းမကို၊ ရွီကြလီသော်၊ နှစ်သိန်းကျော်၏၊ ကြားသော်မြင်ခါ၊ ကြောက်ဖွယ်သာတည်း" ဟူ၍ဖြစ်သည်။
(၁၈၂၆) ခုနှစ် ဗြိတိသျှလက်အောက် ကျရောက်ရသောအခါ မြန်မာလက်အောက် နှစ် (၄၀) ငရဲစခန်းသည် တခန်းရပ်ခသည်။ ကျူးကျော်သူမြန်မာများကိုမောင်းထုတ်၍ အင်္ဂလိပ်ရို့က တဖန်အုပ်ချုပ်သည်။ သို့သော်အင်္ဂလိပ်အုပ်ချုပ်ချိန်တွင် ရခိုင်ပြည်၌ လူမကျန်တော့ပေ။
ရခိုင်နိုင်ငံတော်တခုလုံးသည် သုသာန်တစပြင်ပမာ တောကြီးမျက်မဲဖြစ်နီလီတော့သည်။အင်္ဂလိပ်အကာအကွယ်ကြောင့် သီကံမရောက်သတ်မပျောက်ပဲ ရခိုင်တချို့ ဘင်္ဂလားနယ်တွင် ကျန်ရစ်သည်။
ထိုသူများထဲမှ (၅) သောင်းခန်ကို ပြန်ခေါ်ယူ၍ ရခိုင်ပြည်၌ ပြန်လည်နီရာချထားပီးသည်။ သခင်ပြောင်းသော ကျွန်ဘဝသည်ပင် ရခိုင်ရို့အဖို့ ကံထူးကံမြတ်ဖြစ်သည်။မြန်မာများ၏ လူမျိုးရေးမုန်းတီးမှုဖြင့် မျိုးဖြုတ်သတ်ဖြတ်ခြင်းမှ လွတ်မြောက်ခရသည်မဟုတ်ပါလား။
ကျွန်ဘဝတဖြစ်လဲကိုပင် ရခိုင်ရို့က "ခေတ်ကောင်းခါကယင်" ဟူ၍ တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြသည်။မှန်ပေသည်။မြန်မာလက်အောက် နှစ် (၄၀) လုံးလုံး ဒုက္ခရောက်နီသော ရခိုင်သားများသည် ရီနှစ်သားတုံးဆွဲမိသကဲ့သို့ အသက်လျှူဖြောင့်ခရသည်။
ကိုယ့်အိုးကိုယ့်အိမ် ပြန်နီခွင့်ရခသည်။တနည်းဆိုရလျှင် ဗြိတိသျှရို့၏အကာအကွယ်ကို ရခိုင်ရို့ရသည်။ရခိုင့်စာပီ ပြန်လည်အညွန့်ထားလာနိုင်သည်။လွတ်လပ်စွာ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ခွင့်ဟိသဖြင့် အတော်အသင့် ချမ်းသာလာကြသည်။
ခေတ်ပညာကိုလည်း သင်ကြားခွင့်ရလာသည်။ ဘွဲ့ထူးဂုဏ်ထူးများကို ဆွတ်ခူးနိုင်ခသည်။ အင်္ဂလိပ်ခေတ်တွင် ရာထူးကြီးများကို ရခိုင်သားများထမ်းဆောင်နိုင်ခသည်ဟု အိုင်စီအက်စ် ဦးကျော်မင်းက မှတ်တမ်းရွီးဖူးခသည်။
ရခိုင်ကျွန်သက် (၁၀၁) နှစ် တင်းတင်းပြည့်သောနိ (၁၈၈၆) ခု၊ ဇွန်နဝါရီလ (၁) ရက်နိတွင် ဗမာတပြည်လုံး အင်္ဂလိပ်လက်အတွင်းသို့ ကျရောက်ရသည်။ ဝဋ်ကြီးပြန်လည်သည်။ရခိုင့်အမျိုးသားဆရာတော်ဥတ္တမသည် မြန်မာပြည်၌ လွတ်လပ်ရေးမျိုးစိကို ဦးစွာပထမအစချသည်။ ဝံသာနုစိတ်ဓါတ်ကို နိူးဆွပီးသည်။
အကြိမ်ကြိမ်ထောင်ကျ အဖမ်းခံခရသည်။ အင်္ဂလိပ်လက်အောက်မှလွတ်မြောက်ရန် ရခိုင့်ဂေါင်းဆောင်များသည် မြန်မာများနှင့်တန်းတူ ကြိုးပမ်းခသည်။အချောင်မခို ဂျောင်မခိုခပါ။
မင်းသားကြီးရွှီးဘန်းသည် အင်္ဂလိပ်ကို စတင်တော်လှန်ရန်ကြိုးပန်းသည်။ဤသည်ကို မြန်မာမှတ်တမ်း၌မဟိ။ ဖက်ဆစ်ဂျပန်ကို ရခိုင်က အယင်တော်လှန်သည်။ (၁၉၄၅) ခု၊ မတ်လ (၂၇) ရက်နိ မြန်မာက ဂျပန်ကို တော်လှန်သောအခါ ရခိုင့်ပြည်တွင် ဂျပန်မဟိပါယာ။ ရခိုင်ရို့သည် ကိုယ်အားကိုယ်ကိုး တော်လှန်ခြင်းဖြစ်သည်။ဗမာတပ်မတော်မှ ရိုင်ဖယ်တလက် အကူအညီမယူပါ။
ဂျပန်အဆုတ်တွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် ရခိုင်ပြည်သို့ရောက်လာသည်။ဦးစိန္တာကျင်းပသော ကြာအင်းတောင်ညီလာခံကို တက်ဖြစ်သည်။အလံနီပါတီမှ ဦးအောင်သန်းက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို လူသတ်မှုဖြင့် တရားစွဲသည်။ (အသေးစိပ်ကို ဘုံပေါက်သာကျော်စာအုပ်တွင်ဖတ်ပါ။)
စစ်တွေကြက်ကိုင်းတန်တွင် "ရခိုင်တကျပ်၊ ဗမာတကျပ်၊ သျှမ်းတကျပ်၊ ဗမာတကျပ်" တရားကိုဟောသည်။ စည်းရုံး၍မရသဖြင့် "မြွီပွီးနှင့် ရခိုင်ကိုတွိလျှင် ရခိုင်ကို အယင်သတ်ရမည်" ဟု မြန်မာပြည်တွင် ဝါဒဖြန့်သည်။သခင်စိုး၊ သခင်သန်းထွန်း၊ ကွန်မြူနစ်အဖွဲ့များကလည်း ဆရာတော်ဦးပညာသီဟအား ဗမာပြည်လွတ်လပ်ရေးရလျှင် ရခိုင်ကိုလည်း လွတ်လပ်ရေးပီးမည်။
မန္တလေးမဟာမုနိကိုလည်း ပြန်ပီးမည်ဟု လိမ်သည်။ ညာဏ်တုံးသော ရခိုင်ဂေါင်းဆောင်များက မြန်မာမကျက်လှည့်ကို ယုံကြသည်။လွတ်လပ်ရေးရလာသည်။ သို့သော် မြန်မာ့လွတ်လက်ရေးဖြစ်သည်။ ရခိုင်နှင့်မဆိုင်ပါ။ သျှမ်းနှင့်မဆိုင်ပါ။
မွန်နှင့်မဆိုင်ပါ။ ကရင်နှင့်မဆိုင်ပါ။တိုင်းရင်းသားများကို ကလိမ်ကကျစ်လုပ်၍ ရယူခသော လွတ်လပ်ရေးဖြစ်သည်။ ဗိုက်ချုပ်အောင်ဆန်းပြောသော ရခိုင်တကျပ်-မွန်တကျပ်။သျှမ်းတကျပ်-ဗမာတကျပ်မသည် တိုင်းရင်းသားတကျပ်-ဗမာအားလုံးဖြစ်လာသည်။ တိုင်းရင်းသားများ တကျပ်တကျပ်စီရသောအခါ မြန်မာ (၇) ကျပ် အိပ်ဝင်သပိတ်ဝင် ပင့်သကူအချောင်ရသည်။
(ယခု (DVB) အသံလွှင့်ဌာနတွင် မြန်မာအသံက တရက်ကို (၄၅) မိနိရသောအခါ တိုင်းရင်းသားတမျိုးစီက တပတ်လုံးမှ (၁၅) မိနိရသည့် ဥပမာနှင့် အလားတူသည်။ အယ်ဒီတာမှတ်ချက်။)
တနည်းပြောရလျှင် ရခိုင်ရို့သည် မြန်မာများအောက် နောက်တကြိမ် ကျွန်ဇာတ်အသွင်းခံလိုက်ရသည်။မြန်မာရို့သည် သမိုင်းစဉ်တလျှောက် ရခိုင်လူမျိုးအပေါ် မည်သည့်အခါမှ ကောင်းကျိုးမပီးခပါ။ ဗိုလ်ရန်အောင်ဂေါင်းဆောင်သော ဗမာ့တပ်မတော်သည် မောင်ဝိုင်းတပ်အပြီး နှစ်ပေါင်း (၁၁၆) နှစ်အကြာတွင် ရခိုင်ပြည်၌ ပထမဆုံးခြီချလာသည်။ (၁၉၄၂) ခုတွင် ကုလားရန်ကိုကြောက်၍ထွက်ပြီးလာသော ရခိုင် (၄၀၀) ကျော်ကို ဗိုလ်ရန်အောင်သည် အကူအညီမပီးဘဲ သင်္ဘောကိုဖောက်၍ လုပ်ကြံလိုက်သည်။မြန်မာပြည်လွတ်လပ်ရေးရပြီ။
လွတ်လပ်သောမြန်မာပြည်တွင် ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ကျင့်သုံးသည်ဟုဆိုသည်။ ပါလီမန်တွင် ရခိုင်သားများ လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်၊ တင်ပြခွင့်ကားရသည်။ သို့သော် လွတ်လပ်စွာ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကား မရ၊ (၁၉၅၂) ခုနှစ်တွင် တောပန်ဇင်း၊ အခစား (ကျော်တော်)၊ မကျည်းကုန်း (မာန်အောင်) စသောရွာများကို ရွာလုံးကျွတ်သတ်ဖြစ်ပြီး ဦးနုက ရခိုင်သားများကို ဒီမိုကရေစီနှင့်မိတ်ဆက်ပီးသည်။
ဦးနု၏ဒီမိုကရေစီသည် ရခိုင်သားများအဖို့ ခါးသီးလှသည်။ မြောက်ဦးမြို့နန်းရာကုန်းထက်တွင် ရခိုင်မျိုးချစ်ထွန်းလှအောင်ကို မြန်မာစစ်တပ်က ကျားထိုးသတ်ပစ်လိုက်သည်။ရခိုင်နိုင်ငံတော်သည် ဂျပန်ထက် အဆပေါင်းများစွာဆိုးသော မြန်မာလက်အောက်သို့ အဖန်ကျရောက်ရသည်။
(၁၉၅၈) ခုနှစ်တွင် ဖဆပလနှစ်ခြမ်းကွဲသည်။ ပြည်နယ်ပြဿနာပေါ်လာသည်။ဦးနုဂေါင်းဆောင်သော တည်မြဲဖဆလက သူ့ပါတီကိုမဲပီးလျှင် ရခိုင်ကိုပြည်နယ်ပီးမည်ဟုလိမ်သည်။ သန့်ယှင်းဖဆပလဘဆွေက "ပြည်နယ်မပေးနိုင်ဘူး။ ခင်ဗျားတို့ကို ကျန်တဲ့ဟာကိုဘဲ ပေးနိုင်မည်" ဟု ပြောင်တိုက်စိတ်ခေါ်သည်။
ရခိုင်သားများသည် ပြညနယ်အဆင့်ကိုပင် မြန်မာများထံမှ လက်ဖြန့်တောင်းခံရသော သူတောင်းစားဘဝကျရောက်ရတော့သည်။ပြည်နယ်လိုချင်သော ရခိုင်သားများသည် မျက်စိမှိတ်၍ ရတညမဲအပါအဝင် အမတ်နီရာ (၉) ခုစလုံးကို ဦးနုအားပုံအောလိုက်သည်။
(၁၉၆၀) ပြည့် ဖေဖေါ်ဝါရီလရွီးကောက်ပွဲတွင် ဦးနုပါတီအနိုင်ရသည်။ သို့သော် ရခိုင်သားများပြည်နယ်မရ။ ဒုတိယံပိအလိမ်ခံရသည်။ ရခိုင်သားများမှာ အရှက်လည်းရ ဝမ်းလည်းကြီးရသည်။ "ဦးနုကတိတည်ပါစီ။ ရခိုင်ပြည်နယ်အယင်ပီး။" ဟူ၍သာ ငယ်သံပါအောင်အော်၍ လိုင်ခြောင်းကွဲသည်။ ဝင်သီးနာသည်။ရခိုင်က ပြည်နယ်တောင်း၊ သျှမ်းက ဖယ်ဒရယ်မူတင်လာသောအခါ ဦးနုသည် ဟန်မဆောင်နိုင်တော့ပေ။
နေဝင်းကို အာဏာလွှဲအပ်လိုက်ရသည်။ မြန်မာများ၏ပင်ကိုယ်ဘီလူးရုပ်ကို ပြရတော့သည်။အောင်ဆန်း "တကျပ်" ကို နေဝင်းက လုယူလားခသည်။ ထိုအခါ မြန်မာက (၁၄) ကျပ်ရ၍ တိုင်းရင်းသားများမှာ ဝလုံးကွင်းသည်။
(၁၉၆၇) ခုနှစ် သြဂုတ်လ (၁၃) ရက်ဥပုသ်နိ စစ်တွေမြို့တွင် ရခိုင်သား (၃၀၀) ကျော်ကို နေဝင်းသတ်ပစ်လိုက်သည်။ "ဘားဗူဟိယင့်၊ ဆန်ဟိယင့်၊ ဒိုင်းကျီဟိယင့် ရီယိဟင့်" ဘဝင်မြင့်သောရခိုင်သား။
နေဝင်းလက်အောက် ထမင်းငတ်၍ သူတောင်းစားဖြစ်သည်။ ("ယခီး" ဟု အခေါ်ခံရသည်။ မြန်မာ (ဗချီး) နှင့် ရခိုင် (ယခီး) အသားစားအရီစားဖြစ်ကတ်ရသည်။)မြဆန်စက်ရှိတွင် ရခိုင်သားများ ခွီးသီဝက်သီ သီကတ်ရသည်။ "မသီပါသိမ့်၊ အသက်ဟိသိမ့်ရေ" ဆိုကေလည်း မလွတ်။
အရှင်လတ်လတ် မြီမြှုပ်ခံရသည်။ မဆလလက်အောက် ရခိုင်တမျိုးသားလုံး စာရိတ္တမဏ္ဍိုင်ပျက်စီး၍ ရခိုင်လူညွန့်တုံးသည်။ ညီအစ်ကိုပါဟု မြန်မာများလိမ်၍မရ။ ရခိုင်နှင့်မြန်မာသည် တသီးတခြားစီဖြစ်သည်။ရခိုင်လူမျိုးသည် သမိုင်းစဉ်ဆက် ကိုယ့်ထီးကိုယ့်နန်း ရာဇဝင်နှင့်လာသော လူမျိုးတမျိုးဖြစ်သည်။ မြန်မာရို့သည် မွန်ကတဆင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်သည်။
မြန်မာများ အရေးကြီးရဟန်းကိုးကွယ်နီချိန်တွင် ရခိုင်ပြည်၌ နှစ်ပေါင်းတထောင်ကျော် ဗဒ္ဓဘာသာ အမြစ်တွယ်ပြီးဖြစ်သည်။ဧရာဝတီမြစ်သည် ကပ္ပလီပင်လယ်ထဲသို့စီးဝင်သည်။ ကုလားတန်မြစ်သည် အင်္ဂလားပင်လယ်ထဲသို့ စီးဆင်းသည်။ ရခိုင်နှင့် မြန်မာသည် မြီလည်းမတူ၊ ရီလည်းမတူ၊ လူလည်းခြားသည်။
(၈၈) အရေးအခင်းဖြစ်၍ ဗမာတပြည်လုံး ကျကျက်ရိုက်သောအခါတွင် ရခိုင်ပြည်ကိုလည်း ကူးစက်လာသည်။ ပြီးယှောင်ခရသော ရခိုင်သားများမှာ ဘောက်သာလိုက်။ ထောင်ကျသားလည်း မကန်။ ကြိုးပီးအသတ်ခံရသူမနည်း။ (၁၉၉၀) ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ရခိုင်ပါတီ (ALD) က အမတ် (၁၁) နီရာရသည်။ အဖိုးဦးသာထွန်း ထောင်ထဲ၌အသတ်ခံရသည်။ များမကြာ၊ ရခိုင်ပါတီ အဖြိုခံရသည်။ ရခိုင်ဂေါင်းဆောင်များကို ဖမ်းဆီးထောင်ချသည်။
(NLD) ပါတီက မဲဆွယ်တရားဟောနိုင်ချိန်တွင် ရခိုင်သားမျာမှာ ယေင်၍ပင် ဟ၍မရ။ပြောမိဆိုမိလျှင် မျက်ကန်းမျိုးချစ်၊ အမြင်ကျဉ်းသူများအဖြစ် တံဆိပ်အရိုက်ခံရသည်။ ကျဉ်းမြောင်းသော မြန်မာလူမျိုးငယ်ဝါဒအောက်တွင် ရခိုင်သားများ၏ဘဝ စုန်းစုန်းမြုတ်ရပါတော့သည်။
(၁၉၇၄) ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံကို နေဝင်းက (၉၉) ဒဿမ (၇) ရာနှုန်း ထောက်ခံမှုရသည်ဟုလိမ်၍ အတည်ပြုခသည်။ အခုလည်း လိမ်လည်၍ အကြာခင်အတည်ပြုတော့မည်။ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက "မြွီပွီးနှင့် ရခိုင်ကိုတွိလျှင် ရခိုင်ကိုအယင်သတ်ရမည်" ဟုပြောသည်။
ရခိုင်စည်ရုံးရေးခရီးအပြီးတွင် ဒေါစုက "ကျွန်မတော့ ရခိုင်ကိုချမ်မိသွားပြီး" ဟုဆိုသည်။ အသူ့ကို ယုံရပါမည်နည်း။
(၂၀၁၀) ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၃၁) ရက်နိတွင် ရခိုင်ကျွန်သက် အနှစ် (၂၂ ၆) တင်းတင်းပြည့်သည်။ ရခိုင်ပညာတတ်များစဉ်စားပါ။ ပညာမတတ်သူများလည်း စဉ်းစားပါ။ရခိုင်အရိုး တောင်ပုံယပုံဖြစ်လားပြီ။ဂုဏ်ပြုကြပါ။ လေးစားကြပါ။
ယခုတဖန် ရခိုင့်ကံကြမ္မာသည် အကျွန်ုပ်ရို့၏ ဂေါင်းထက်သို့ ကျရောက်လက်ပြီ။ရခိုင့်ပညာတတ်များ၊ ပညာဟိများ၊ ပညာသျှင်များ၊ ပညာမဲ့များအားလုံး သတိထားကြပါ။ မြန်မာရို့ဖော်စပ်သော ဝမ်းနှုတ်ဆီးအမျိုးမျိုးကို သောက်ဖူးခပါပြီ။
ရခိုင်ရို့၏ တခုတည်းသော အန္တိမပန်းတိုင်သည်သည်ကား ပဇာဖြစ်ပါသနည်း။ ရခိုင်အချုပ်အချာအဏာ ရခိုင်လက်တွင်းရောက်ရေးဖြစ်သည်။သမိုင်းကြောင်းကိုပြောလျှင် ပဒေသရာဇ်အချင်းချင်း စစ်ခင်းကတ်သည်ဟူ၍သာ စကားလှဆိုသည်။ သို့သော် မြန်မာရို့သည် ပဒေသရာဇ်များသိမ်းယူခသောနယ်ပြီများကို အပိုင်ရလိုသည်။
ကမ္ဘာမကျေ မသာမြေ ကြွေးကြာ်၍ ဘုရင့်နောင်၊ ကျန်စစ်သား၊ အလောင်းဘုရားစသည်ဖြင့် အခြောက်တိုက် ရန်စောင်နီတတ်သည်။ ပညာပီးရဖို့ အချိန်ရောက်နီပါဗျယ်။ ကနိအချိန်၌ ရခိုင်သားများသည် မည်သို့မျှ မတုံ့ပြန်သိမ့်သော်လည်း မုန်တိုင်းသည် ကြိမ်းဝါးဖို့အတွက် အားယူတာစူလျှက်ဟိသည်။
အပြင်မှာပျား၊ အတွင်းမျှားလှည့်ဖျားမာယာ၊ နှုတ်ဝါစာဖြင့်ဖွယ်လျှညလျှောက်သား၊ ခွီးစကားကိုယုံမှားတခါ မဟိရာ—။ပြည်ပရောက် ရခိုင်မျိုးချစ် လူငယ်များ အတွက်
(၂၀၁၁) ခုနှစ် သြာဂုတ် (၁၀) ရက် အင်္ဂါ နိ။( ပြည်တွင်ပြည်ပ နီထိုင်ရေ အဖရခိုင်မျိုးချစ်သားရို့အတွက် ဤစာစောင်ကို ပြန်လှည်တင်ပီးလိုက်ပါယင်)
Posted by fatherarankan
SOURCE: Per kind favour of Zaw Min Tun through Zaw Zaw Aung Ko by ရခိုင် အမျိုးသားတို့၏ ခံစားချက်
Posted: 05 May 2012 02:30 AM PDT
"Ini merupakan kejadian kedua berlaku apabila lelaki berkenaan bertindak berani dengan menceroboh kawasan rumah kami pada jam 1 pagi untuk melakukan perbuatan keji ini.
"Dalam kejadian pertama pada awal Mac lalu, dua helai coli hilang tetapi dikembalikan seminggu kemudian dengan sekeping nota lucah. Saya yakin ia melibatkan individu sama," katanya selepas membuat laporan polis di Balai Polis Bercham di sini, kelmarin.
"Keluarga sangat bimbang dengan lelaki berkenaan yang mungkin bertindak lebih berani dengan menceroboh rumah pula," katanya.
Sementara itu, Ketua Polis Daerah, Asisten Komisioner Azisman Alias ketika dihubungi berkata, pihaknya mengesahkan menerima laporan berkenaan dan rondaan di kawasan berkenaan akan ditingkatkan bagi menjaga keselamatan penduduk. -SH
Posted: 04 May 2012 11:48 PM PDT
It is going to beavery busy weekend as my nephew Alvin is getting married today. Inashort while, I have to get ready for the tea ceremony and the wedding dinner thereafter. Tomorrow is my cousin's youngest son's wedding so I have to exercise in between to make sure that I do not put on any weight. Yesterday was another busy day with my tailor for her to tweak my sarung kebaya outfit and also visiting my mom-in-law who fell ill with all the excitement going on. Apart from having the runs due toatummy upset, I am colouring my hair (a D-I-Y job to save costs!) and have to go soon.
Anyway, here'sabeautiful poem written by Oriah Mountain Dreamer Here.That link also tells you more about the poet:
Oriah is first and foremostastory-teller,alover of words and symbols and the stories that lift our spirits, open our hearts and offer us ways to see patterns and create meaning in our lives. The focus of her life and work has been an on-going inquiry into the Sacred Mystery. Her writing, teaching and personal journey all explore how we can each become the individual we are at the deepest level of being and how we can co-create meaning together in the world. Blending humour, insight and compassion for our human struggles Oriah encourages herself and others to be ruthlessly honest and infinitely kind toward our own strengths and our weaknesses. CLICK HERE FOR MORE.
Posted: 04 May 2012 11:57 PM PDT
Kuala Lumpur: Empat peguam wanita yang ditahan polis ketika hendak berjumpa dengan anak guam mereka yang ditahan kerana mengadakan perhimpunan nyalaan lilin tiga tahun lalu, hari ini memfailkan saman terhadap polis dan kerajaan.
Posted: 04 May 2012 11:50 PM PDT
Satu berita yang agak mengejutkan. Penganugerahan pingat dari Singapura yang masih mengekalkan ISA kepada KPN Tan Sri Ismail Omar sebaik saja selepas Perhimpunan Bersih.
Rakyat tertanya-tanya, apakah kerana kegembiraan Singapura melihat kesediaan Polis Malaysia bertindak membantai dan memukul rakyat sendiri maka KPN dianugerahkan pingat?
Posted: 04 May 2012 08:53 PM PDT
US Debt Clock This is one of the best web sites I have used for reference. It constantly reminds the world of the dangers of high debts. It also shows how open and transparent is US - not evenasingle cent of its debt is concealed. That is the beautiful side of this country!
Posted: 04 May 2012 10:57 PM PDT
AsiaOne Itu Muka Harimau Betina Tigress!
A university student, Natasha Wan Xue Wen attacked four police officers after going to the Zouk dance club.
Mr Lim shouted at the policemen, and Wan suddenly punched an officer in the face and began hurling vulgarities.
On the way to the police station, Wan head-butted one of the female officers and bit the other on the wrist and hand.
Wan's lawyer said she was suffering from stress when she committed the offences. A test showed that her blood-alcohol level was 172mg per 100ml of blood - more than twice the 80mg level for drink driving.
Singapore Police is very professional, in Malingsia She would have end up DEAD!
if police also descend to level of criminals might as well hire criminals to bekam police...
0oops, its actually already happening in Malingsia...
Posted: 05 May 2012 09:36 AM PDT
Jika Najib Mubarak, rakyat perlu guling BN'
SHAH ALAM – Kenyataan Datuk Seri Najib Tun Razak yang menggambarkan tindakan peserta perhimpunan Bersih 3.0 cuba menggulingkan kerajaan dan mahu menjadikan Dataran Merdeka seolah-olah Dataran Tahrir, dengan sendirinya mengiktiraf diri beliau bekas Presiden Mesir, Hosni Mubarak.
"Jika beliau (Najib) mengatakan bahawa tujuan perhimpunan diadakan adalah untuk menggulingkan kerajaan, maka sebenarnya beliau mengalami 'mimpi liar!'," ujar beliau lagi. -SH
Rusuhan cubaan gulingkan kerajaan: Najib
GUA MUSANG: Perhimpunan badan bukan kerajaan yang disokong pembangkang berhampiran Dataran Merdeka di Kuala Lumpur, Sabtu lalu adalah satu percubaan untuk menggulingkan kerajaan yang dipilih oleh rakyat menerusi sistem demokrasi, kata Datuk Seri Najib Razak.
Perdana Menteri berkata, tindakan itu menunjukkan pihak yang terbabit tidak menghormati kerajaan yang dipilih oleh rakyat menerusi proses yang sah.
Perdana Menteri yang dalam lawatan kerja sehari ke negeri ini, berucap di hadapan lebih 30,000 orang yang mula menunggu ketibaan beliau sejak7pagi di padang Pusat Sivik itu.
Perdana Menteri berkata, kumpulan tersebut menyalahkan polis yang didakwa menyebabkan tercetusnya kekecohan pada perhimpunan tersebut.
Najib yang juga Pengerusi Barisan Nasional mencabar kumpulan itu agar bersaing melalui saluran pilihan raya.
"Kepada kumpulan ini, bersainglah di peti undi, kalau anak jantan bersainglah di peti undi.
"Saya tidak nafikan ada sedikit sebanyak kekasaran oleh polis, tetapi perkara ini boleh dielakkan jika mereka hormati undang-undang yang diluluskan Parlimen," katanya.
Perdana Menteri berkata, kerajaan sudah menawarkan lokasi yang sesuai untuk mereka berhimpun secara aman termasuk di Stadium Merdeka tetapi mereka menolak tawaran itu.
Pada sidang media selepas itu, Najib berkata ada usaha menerusi dalam talian oleh pihak tertentu untuk memaparkan polis menggunakan kekerasan berlebihan dan kerajaan akan menerangkan kepada rakyat perkara sebenar.
"Yang pertama mereka tidak menepati janji mereka. Pada awalnya kerajaan juga nak elakkan (perkara tidak diingini) sebab itu kita tawarkan Stadium Merdeka. Mereka nakkan perbalahan dan apabila ini berlaku, mereka boleh tonjolkan kekasaran polis dan sikap kerajaan yang tidak bertimbang rasa...ini boleh jadi modal politik.
"Sebab itu mereka tolak Stadium Merdeka...padahal (Stadium Merdeka) itulah hasrat mereka sewaktu perhimpunan terdahulu," katanya.
Beliau berkata, dalam perhimpunan itu terdapat dua kumpulan iaitu yang mahu berhimpun secara aman dan yang mahu "hijack' (rampas) perhimpunan bagi tujuan politik serta merancang untuk menawan Dataran Merdeka sekurang-kurangnya sehingga sambutan Hari Pekerja (1 Mei).
"Bagi yang rasional dan tahu kesannya mereka tak sokong perhimpunan itu. Mereka tahu bila ada perhimpunan seperti itu mesti ada perkara tidak boleh dikawal..ada orang yang tak hormatkan undang-undang dan melakukan kekerasan serta budaya samseng," katanya.
Perdana Menteri berkata, kerajaan tidak mempunyai masalah untuk membenarkan mana-mana pihak mengadakan perhimpunan aman termasuk -parti pembangkang dan pihak yang tidak menyokong kerajaan tetapi perlu berdasarkan undang-undang yang ada.
"Mesti ambil tindakan berasaskan undang-undang negara. Undang-undang negara luluskan perhimpunan aman...asalkan bertindak mengikut lunas-lunas tersebut tak ada masalah," katanya. - BERNAMA
Hari ini, Najib menuduh perhimpunan BERSIH 3.0 Sabtu lalu adalah satu percubaan untuk menggulingkan kerajaan yang dipilih oleh rakyat menerusi sistem demokrasi. Ternyata ia satu penyelewengan fakta di mana yang diminta oleh rakyat ialah "sistem pilihanraya BERSIH & ADIL", bukan untuk mengguling kerjaan yang ada.
Sebenarnya Najib cuba menghasut rakyat untuk membenci BERSIH. Cuba pertahankan SPR yang korup yang selama ini menjadi kuda tunggangan UMNO BN untuk terus pertahankan kuasa.
PRU 2008 menyaksikan UMNO BN sudah tumbang di Semenanjung. Jika tanpa sokongan Sabah dan Sarawak, UMNO BN sudah tamat tempoh pemerintahannya dan telah keluar dari Putrajaya.
Setiap perkataan itu adalah doa (Kullu kalam addu'a). Apabila Najib berkata bahawa rakyat ingin menggulingkan kerajaan beliau macam apa yang berlaku di Mesir, BERARTI beliau sendiri yang mendoakan perkara sebegitu berlaku, jangan salahkan rakyat lagi jika ia bernar-benar berlaku nanti.
Posted: 04 May 2012 03:30 PM PDT
Velcro isarip-off.